Taratasy misokatra Misy andiana miaramila nanao tsikera mavaivay?
Namoaka taratasy misokatra in-taona ny andiana miaramila am-perin’asa sy misotro ronono, ka isan’izany ny « Evaluation de la défense de Madagascar 2021”.
Naneho fiondrehana eo anatrehan’ireo lavo izy ireo. Manoloana ny asa vitan’ny Gouvernementa nandritra ny taona 2021, indrindra ho an’ny Minisiteran’ny fiarovana, dia nokianin’izy ireo mafy ho “Restructuration nulle et non opérationnelle” no nisy teto, tsy nanaraka dingana na “procédure” fa dika mitovy amin’ny tany France kanefa ny “Principe de défense”, dia tokony hiainga amin’ny fakan-kevitra nasionaly mivelatra ahafahana mijery ny olan’ny fiarovana eto amin’ny firenena na “contexte de la défense et sécurité à Madagascar et ses environnements”, fijerenany politikam-panjakana,… ambana ny filaminana sy fandriampahalemena (menaces à la Paix et sécurité), hoy io taratasy misokatra io. Noho ireo dia tokony hoeken’ny malagasy rehetra ireo ambana ireo, ka akatoavin’ny parlemanta sy ny Filankevitry ny minisitra amin’ny alalan’ny « Livre blanc », izay vao makany amin’ny departemanta voakasika momba ny fiarovana, ka ny “concept de défense” no anjaran’ny Minisiteran’ny fiarovana amin’izany, izay vao mijery ny fomba fanatanterahana, ahafahana mametraka sy manatateraka ny tanjona. Anisan’izany ny : « Restructuration », resaka « niveau opératif », na « concentration » na « déconcentration d’efforts et de moyens humains, financiers, matériels, infrastructures et surtout de l’organisation générale de la défense », hoy io hatrany io fanambarana io. Vokany, tsy misy « planification » ny asa 2021, manao asa an-tselika, (pilotage à vue), manao asan’ny « pompier », ohatran’ny « opération » tany Menabe ny Tafika, tsy foana ny asan-dahalo, tsy nilamina ny tany, nikorontana (désorganisation généralisée) ny tafika, raha toa ka tsy voakitika ny teo anivon’ny zandarimaria,… hoy ny ampahan’ny fanambarana.
“Fisaraham-bazana atahorana hiteraka korotana no misy eo anivon’nyTafika. Lesona tsara tadidiana, fa ny tafika no nanao ny « évènement Capsat » tamin’ny 2009, fa tsy ny zandarimaria akory. Noho izany mila jerena akaiky ny firaisan-kina Tompoko. Amin’izao io no ministra (MDN) no nitana ny « longévité » ela indrindra amin’ny MDN teto Madagasikara. Ny MDN dia andiany faha-13 na « La 13 »; efa tsisy intsony ny « La 13 » am-perinasa; tsisy intsony ny « La 14 »; efa tsy hisy intsony ihany koa ny « La 15 » eo am-perinasa amin’ny taona2023. Mbola maro anefa ireo “La 16” sy “La 17” efa manam-pahaizana sy manam-panahy. Am-pitiavana be Tompoko, mbola tsy tara raha ahintsy izay azo ahintsy”, hoy io fanambarana io. Andrasana kosa izay mety ho setriny avy amin’ny Minisiteran’ny Fiarovam-pirenena satria resaka saropady ity raharaha ity.
Ambilobe Vehivavy 3 tratra nangalatra lavanila maitso
Voasambotry ny Polisy miasa ao amin'ny Fitaleavam-paritry ny Filaminam-bahoaka DIANA ny vehivavy miisa telo afak’omaly 18 mey rehefa nividy lavanila maintso halatra.